ỊWỤNYE ỤDA OMUME NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Ikwuputa aha zuru oke nke usoro ihe a site na nke mbido abughi ihe kachasi ike. Otú ọ dị, ikpebi software naanị aha bụ kama nzuzu. Ma e wezụga nke ahụ, gị, dịka m, na-anụrịrị ịnụ banyere Wondershare maka oge mbụ. Ka o sina dị, e nwere ihe ị ga-ele anya, n'ihi na SlideShow Builder nwere ezigbo ọrụ.
Tupu ịga n'ihu na nyochaa ohere, ọ dị mkpa iburu n'obi na usoro ihe omume ahụ nwere ụkpụrụ dị iche iche ma dị elu. Nke ahụ bụ ihe dị iche n'etiti onwe ha, ọ dịbeghị m achọta. Ya mere, ka anyị ruo n'ókè.
Nke a bụ ebe ọrụ niile malitere. Na-agbakwụnye foto na vidiyo maka ihe ngosi slide site na onye na-enyocha ya mgbe niile. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ozugbo ịhazi ihe ndị dị na iwu ahụ achọrọ, tinyekwa obere mgbanwe na nke ọ bụla, dịka ntụgharị. Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume idezi ihe ngosi ọ bụla na atụmatụ ndị e wuru na ya, bụ nke bara uru ịkọwa ihe ndị ọzọ.
N'ezie, usoro ihe omume a dị anya site na ọkwa nke ndị nchịkọta akụkọ na-adịghị mma. Otú ọ dị, ịnwere ike imezi agba agba nke mbụ site n'ịgbanwe ntụgharị nke ọdịiche, nchapụta, saturation na hue. E nwekwara usoro akpaka maka nhazigharị ngwa ngwa.
Site n'ịgbanwe agba, ịnwere ike ịkwaga ịkụ ihe oyiyi ahụ. Ọ bara uru ịkọtara ọnụ ọgụgụ dị nta nke ntọala - naanị 16: 9 ma ọ bụ 4: 3. Enwere m obi ụtọ na ọ dịkarịa ala, e nwere usoro ntuziaka.
N'ikpeazụ, ị nwere ike iwunye foto dị iche iche nzacha. Ndị a bụ ihe nhazi nhazi dị mma, dịka ntutu, mosaic, sepia, invert, na ihe yiri ya. N'ozuzu, ọ dịghị ihe pụtara ìhè.
Na ebe a SlideShow Builder nwere ike ịja mma n'ezie. N'ezie, enwere ike ịhọrọ ụdị, ụdị, na nlebara anya, ụdị ụda! O yiri ka ọ bụ ihe nzuzu, mana ugbu a, ọ dịghị usoro dị otú ahụ emetụla n'ụzọ dị otú a, ma ihe dị mkpa dị mfe. Ihe kwesiri ekwenye bu ike iji aka gi dozie onyinyo na onwunwu. Maka onye nke ọ bụla, a na-ahọrọ agba na ogo okwu. Maka onyinyo ahụ, na mgbakwunye, ị nwere ike ịmegharịrị n'akuku na anya site na akwụkwọ ozi.
Paragraf dị iche iche bụ mmetụta nke ọdịdị nke ederede ahụ. N'ezie, n'ọtụtụ ụzọ, ha bụ ọkọlọtọ: ịkwa osisi, ihe ngosi, "ndị ìsì", wdg. Ma, enwere ezigbo ihe mgbaru ọsọ.
Ebee na-enweghị ha. Akwukwo na ndi ozo di iche iche, anyi ezowo. Ma mmetụta ndị dị otú ahụ dịka mgbidi na ikpuchi 3D dị nnọọ mma. O kwesịkwara ịṅa ntị na mmetụta ndị jikọtara ọtụtụ foto na otu slide. Ihe nkesa dị iche iche site n'isiokwu dị iche iche bara uru. Nanị ihe mgbagwoju anya dị na ya bụ enweghị ike ịgbanwe oge nke mmetụta ahụ.
Na-agbakwunye ihe osise eserese
Cheta ihe ndị a na-adọrọ mmasị site na ochie "Okwu"? N'ihi ya, ha kwagara SlideShow Builder! N'ezie, ọ bụghị akwụkwọ ziri ezi, kama echiche ahụ n'onwe ya. Ọ dị mma na-adọrọ mmasị, na njedebe zuru ezu (ntụgharị, na-agagharị na nghọta).
Nke a nwekwara ike ịgụnye mmetụta (otu ọzọ). Nke a bụkwa ihe dị mfe na-ekpo ọkụ n'elu ihe ngosi ahụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ kpakpando, snow, ụrọ, wdg. N'ụzọ doro anya, ị gaghị eji ihe a nile rụọ ọrụ dị egwu, ma mgbe ị mepụtara vidiyo maka ụmụaka - enweghị nsogbu.
Na-arụ ọrụ na ọdịyo
Na ebe a dike anyị nwere ihe na-enwu n'ihu ndị asọmpi. Ee, ebe a ị nwekwara ike ịgbakwunye ma belata egwu, ma anyị ahụlarị ya. Ma, ndị ndebiri ebido arụnyere na-adọrọ mmasị ugbu a. E nwere nanị 15 n'ime ha, ma nke a bụ nnọọ oke. Otu n'ime ha na-eto, ụda nke ọdịdị na anụmanụ.
• Utu eji
• Ọtụtụ nsogbu
• Ihe osise na mmetụta dị mma
Ihe ọghọm nke usoro ihe omume ahụ
• Ọnụnọ nke nnukwu ahụhụ
• Enweghị asụsụ Russian
Ya mere, Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe bụ usoro dị mma maka ịmepụta ihe nkiri slide, nke nwere, ma e wezụga, ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa, kama ọ bụ ọrụ dị mma. O di nwute, n'oge ule, usoro ihe omume ahu nyere otutu njehie otutu oge, ihe kpatara ya bu ihe doro anya.
Download Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe Trial
Movavi SlideShow Okike Ihe ngosi ihe ngosi nke di elu Bart PE na-ewu ihe Adobe Flash Builder
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe dị mfe, ma dị ike n'ihe gbasara atụmatụ na arụmọrụ, mmemme maka ịmepụta ihe ngosi slide.
Onye Mmepụta: Wondershare Software
Ọnụ: $ 40